အသည်းကောင်းမှ ပွဲတောင်းပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » အသည်းကောင်းမှ ပွဲတောင်းပါ
Posted by လင်းဝေ on Jun 13, 2011 in Food, Drink & Recipes, Health & Fitness | 10 comments
ကျန်းမာရေးအတွက် အာယုဒါနပြုပါသည်လို့ ရေးထားတဲ့ စာလေး ရတော့ ဝေမျှချင်စိတ်ပေါ်လာပါတယ်။
ဒီဆိုက်မှာ လာဖတ်ကြသူတွေထဲမှာ အရက်ကြောင့် အသည်းပင်ပန်းနေသူတွေအတွက်ရော၊ အခြားအကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့်
အသည်းကောင်းမှ ပွဲတောင်းနိုင်မယ်ဆိုသလိုမျိုးပဲ အသည်းက ခန္ဒာတွင်း လုပ်ဆောင်မှုမှာ အလွန်အရေးကြီးလို့ သိပြီးသားဖြစ်ရင်လည်း မသိသေးသူတွေအတွက်ပေါ့။
၁. အသည်းနဲ့ ကလီစာများသည် လုပ်ဆောင်မှုတူသည့်အပြင် ဆက်စပ်နေကြသည် ။ ထို့ကြောင့် အသည်းတွင် တစ်ခုခုဖြစ်ပါက ကလီစာများတွင်လည်း
တစ်ခုခုဖြစ်နိုင်သည် ။ ကလီစာတွင် တစ်ခုခုဖြစ်လျှင် အသည်းတွင်လည်း ထိခိုက်နိုင်သည် ။
၂. အသည်းမှာ ဒါဏ်ရာအနာတရဖြစ်ပါက သာမန်အားဖြင့် မခံစားရပါ။မည်သည့်နည်းနှင့်မှ မသိနိုင်ပါ ။ကင်ဆာအတော်များများ မဖြစ်ခင်တွင်
အသည်းသည် အရင်ဆုံး ပျက်စီးရသည် ။ ထို့ကြောင့် အသည်းကို သေသေချာချာ ဂရုစိုက်ပါက ကင်ဆာရောဂါကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်ပေသည် ။
၄. တရုတ် လူမျိုး ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် အသည်းမကောင်းကြပါ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၄င်းတို့တွင် အသားနှင့် အဆီစားသုံးမှုများခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည် ။
မှ မနက်စောစော (၃) နာရီ ကြားတွင် ဖြစ်သည် ။ ထို့ကြောင့် ည (၁၁) နာရီ နောက်ပိုင်းမှ အိပ်ခြင်း ၊ ညစာကို နောက်ကျမှ စားခြင်းသည် အသည်းကို
အားနည်းစေသည် ။ ထို့ပြင် မအိပ်ခင် (၂) နာရီ အတွင်း အသားနှင့် အဆီများစားခြင်းသည် အသည်းကို အားနည်းစေသည် ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စားသုံးထားသော
အဆီများကို ချေဖျက်နေရသောကြောင့် အသည်းသည် နားချိန်မရဘဲ အလုပ်လုပ်နေရသည်။ ညအိပ်ယာဝင်နောက်ကျသဖြင့် မနက်တွင် နေမြင့်သည်အထိ အိပ်စက်ခြင်း ၊
နေ့လည်စာ မစားခင် တရေးအိပ်ခြင်းတို့သည် အိပ်ရေးဝရုံသာရှိသော်လည်း၊အသည်းအတွက် မည်သို့ အကျိုးမျှ မရရှိစေပါ ။
၆.အကယ်၍ ည အိပ်ယာဝင်ခါနီးတွင် ဗိုက်ဆာပါက ၊ အသီးအနှံစားသုံးနိုင်ပါသည် ။ ထိုအစာများသည် အစာကျေလွယ်သည် ။ အသားသည် စားသုံးပြီး
(၄)နာရီကြာမှ အူမကြီးသို့ ရောက်သည် ။ထိုအသားကိုပင် အဆီများများနှင့်ချက်ထားပါက (၁၂)နာရီကြာမှ အူမကြီးထဲသို့ ရောက်သည် ။ ထို့ကြောင့် ည
အိပ်ယာဝင်ခါနီးတွင် ထိုအရာများ မစားသုံးသင့်ပေ ။အကယ်၍ စားသုံးမိပါက အသည်းသည် ထို အဆိပ်အတောက်များ ကို ဖယ်ရှားနေရသောကြောင့် မနားရပေ ။ မနက်စောစော
အိပ်ယာထစာတွင် ပင်ပန်းသည်ဟု ခံစားရခြင်းမှာ အထက်ပါအကြောင်းများ၏ရလာဒ်ဖြစ်သည် ။ ထို့ကြောင့် ည အိပ်ယာဝင်ခါနီးတွင်အသီးအနှံစားပါက မနက် အိပ်ယာထတွင် အားအင်ပြည့်ဖြိုး လန်းဆန်းနေပါမည် ။
၇. အဆီသည် အသည်း၏ အဓိက ရန်သူဖြစ်သည် ။ အဆီသည် အသည်း၏လုပ်ငန်းများကို ပျက်စီးစေပြီး အသည်းကိုလည်း အားနည်းစေသည် ။
ဆေးစားခြင်းဖြင့်လည်း အသည်းကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင် မလုပ်နိုင်ပေ ။ဆေးတွင်ပါဝင်သော အခြားဓာတု ဒြပ်ပေါင်းများကို အသည်းက ထပ်မံ ချေဖျက်နေရသည်။
၈.သံလွင်ဆီ ၊ မုန်လာဥ ၊ သခွားသီး ၊ ငရုပ်သီးစိမ်း ၊ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ကြက်သွန်နီ ၊ ဆား ၊ ရွှေဖရုံသီးနှင့် အရိုးပါ စားနိုင်သောငါးကလေးများသည် ၊ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကောင်းမွန်သော အစာများဖြစ်သည် ။ နှမ်းဆီသည်လည်း ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကောင်းမွန်သည် ။
၉.အစာကို ကြာရှည်ခံစေသော ဓါတုဆေး ၊ အရောင်တင်ဆေးနှင့်ကြာဆံသည် အလျူမီနီယံ ဓါတ်ပါခြင်းကြောင့် မကောင်းပါ ။ ပိုးသတ်ဆေးနှင့်
အရောင်ချွတ်ဆေးသည် အသည်းအတွက် မကောင်းပါ ။ ဆေးစားမှားခြင်းကြောင့်အသည်းကို ပျက်စီးစေသည် ။ ကျူံ့သွားစေသည် ။ မိုက်ခရိုဝေ့ မီးဖိုက
၁၀. အင်္ဂလိပ်ဆေးဝါးများသည် ဓါတုနည်းနှင့် ဖော်စပ်ထားသောကြောင့် အသည်းအတွက် မကောင်းပါ ။ တရုတ်ဆေးများသည် ကျောက်ကပ်အတွက် မကောင်းပါ ။
မုန်လာဥဖြူက တရုတ်ဆေးတွင် ပါဝင်သော ဆေးစွမ်းကို ဖျက်ဆီးသည်။
၁၁.ကလေးများ အိပ်ယာဝင်နောက်ကျခြင်းသည် မှတ်ဥာဏ်နှင့် စဉ်းစားဥာဏ် ကို အားနည်းစေသည် ။
၁၃.သဘာဝ အစားအစာများသည် အသည်းအတွက်ကောင်းမွန်သည် ။ စည်သွပ်ဗူးစားသုံးခြင်း ၊ စည်သွပ် အချိူရည်သောက်သုံးခြင်း များသည် အာဟာရ မဖြစ်ပါ ။
၁၄.စိတ်ဓါတ်နှင့် ခံစားမှု ညီမျှနေရန် အရေးကြီးသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း ၊ အသံ ဆူညံခြင်း ၊ ဒေါသထွက်ခြင်း ၊ ကြာရှည်စွာအောင့်အည်းသည်းခံခြင်း ၊ အဆိုးမြင်ဝါဒ ၊ စိတ်ကျရောဂါ ၊ ရည်ရွယ်ချက်မဲ့ ဘ၀၊ တန်ဖိုးမရှိသော ဘ၀နှင့် လူတကာကို အပြစ်တင်တတ်သော စိတ်များသည်၊ ခန္ဓာကိုယ်ကို အားနည်းစေသည်။ လူတစ်ယောက်၏အသည်းသည် မကျန်းမာပါက ထိုလူသည် ၊ဒေါသထွက်လွယ်ခြင်း ၊ စိတ်တိုခြင်း ၊ စိတ်ကောက်လွယ်ခြင်းများကို ဖြစ်ပေါ်ခံစားရသည် ။
၁၅. လေလည်ခြင်း ၊ ချွေးထွက်ခြင်း ၊ ဆီးသွားခြင်းတို့သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအညစ်အကြေးများကို စွန့်ပစ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည် ။
လေအေးခန်းထဲတွင် ကြာရှည် နေပြီး ချွေးထွက်နည်းပါက ကျန်းမာရေးမကောင်းနိုင်ပါ ။ သဘာဝအရ လေလည်ခြင်း ၊ ချွေးထွက်ခြင်းနှင့်
ဆီးသွားခြင်းများသည် အသည်းအတွက်ကောင်းစေသည် ။ ပြူတင်းပေါက်များကို ဖွင့်၍ သဘာဝလေကောင်းလေသန့်များကို ရှုသင့်သည် ။
၁၆.ခန္ဓာကိုယ် တစ်နေရာ ရာတွင် အနာတရဖြစ်ပါက နွေးအောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် နာကျင်ခြင်းကို လျော့ပါးသွားစေပါသည် ။
ရေနွေးကန်တွင် စိမ်ခြင်းသည်လည်း ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းပါသည် ။ သို့သော်နှလုံးရောဂါရှိသူများ သတိထားရန်မှာ ၊ ရေနွေးကန်ထဲစိမ်ခြင်းလျှင်
ရင်ဘတ်ကို မစိမ်မိပါစေနှင့် ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အပူဓါတ်သည် နှလုံးပို၍ အလုပ်လုပ်စေသဖြင့် နှလုံးအတွက် မကောင်းပါ ။
၁၇.ဆန်လုံးတီး ၊ ဂျူံကြမ်း ၊ ကွေကာအုတ် ၊ ကန်စွန်းဥ ၊ ပိန်းဥနှင့် ပြောင်းဖူး စသည်တို့ စားသုံးခြင်းသည် ၊ ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းပါသည် ။
၁၉.မိန်းမများသည် ပို၍ အသက်ရှည်ကြသည် ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် မိန်းမတို့ သဘာဝ ရာသီသွေးလာခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှ အညစ်အကြေးနှင့်
ဒေါသကို မှန်မှန် စွန့်ထုတ်၍ စိတ်ဓါတ်ကို ပို၍ တည်ငြိမ်စေသည်။
၂၀. ၀သော သူများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အစားအစာ တရားလွန်စားကြသည့်အတွက် အသည်း ၊ နှလုံးနှင့် အူလမ်းကြောင်းတွင် မကျန်းမမာဖြစ်တတ်သည် ။ နှလုံးကို ထိခိုက်လျှင် ပုံမှန်အားဖြင့် သွေးဖိအားလည်းထိခိုက်ပြီး သွေးတိုးရောဂါ ဖြစ်တတ်သည် ။
၂၁.အစာအိမ် ရောဂါ ရှိသူများသည်လည်း အစာများများနှင့်အဆီများများ စားခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည် ။
၂၂. နှလုံးနှင့် သားအိမ်သည် ဆက်နေသည် ။ တစ်နေ့လျှင် ရေ (၂) ပုလင်းမှ (၃) ပုလင်း မှန်မှန် သောက်ပေးခြင်းဖြင့် ကျန်းမာစေသည် ။
၂၃.မလိုအပ်ဘဲ အိပ်စရေး (X-ray) ရိုက်ခြင်း (C.T. Scan )လုပ်ခြင်းတို့ကို မလုပ်ပါနှင့် ။ ကိုယ်ခန္ဓာကို ထိခိုက်စေပါသည် ။ နှစ်စဉ်ပုံမှန် ဆေးစစ်ခြင်းဖြင့် ကင်ဆာရောဂါနှင့် တခြားရောဂါများကို မသိနိုင်ပါ။ ပုံမှန် ဆေးစစ်၍ သိရသော အချိန်တွင် ၊ ရောဂါအများစုသည်ရောဂါရင့်နေကြပေပြီ ။ မည်သည့် ရောဂါဖြစ်စေ ခွဲစိတ်မည်ဆိုလျှင် ၊ ဆရာဝန်(၂)ဦး ၊ သို့မဟုတ် ၊ (၃) ဦးနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးအကြံဥာဏ်တောင်းပါ ။ အသည်းရောဂါဖြစ်လျှင် ၊ အင်္ဂလိပ်ဆေးမစားဘဲ သေချာစွာအနားယူပါ ။
၂၄. အသီးအရွက်မှ ဗီတာမင်စီ ( Vitamin-C ) သည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှအဆိပ်အတောက်များကို ထုတ်ပစ်ရာ၌ အလွန် အသုံးဝင်သည် ။
၂၅. နံနက်စောစော (၅) နာရီနှင့် (၇) နာရီ ကြားအချိန်သည် မစင်စွန့်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးအချိန် ဖြစ်သည် ။ သို့မဟုတ်လျှင် အူသိမ်သည်
မစင်မှ အဆိပ်အတောက်ကို စုပ်ယူပေလိမ့်မည် ။ ထိုအကြောင်းများကြောင့်ဝမ်းချူပ်သူများ နေထိုင်မကောင်းကြခြင်းဖြစ်သည် ။
၂၆. သည်းခြေတွင် ကျောက်တည်ခြင်း ၊ အသည်းနှင့် ဦးနှောက်တွင်ကျောက်တည်ခြင်းများသည် အသားနှင့် အဆီမှ အဆိပ်အတောက်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည် ။
၂၇. ကယ်လ်စီယမ် ( ထုံး၊ ဂေါ်ဖီပန်း ၊ သဘောင်္သီး ) နှင့် သံဓါတ် ၊(ထန်းလျက် ၊ ဟင်းနုနွယ် ) စသည်တို့သည် ၊ သည်းခြေနှင့် ကျောက်ကပ်ကိုသန်မာစေသည် ။
၂၉. အနီရောင်ရှိသော အသီးအရွက်များသည် ဦးနှောက်နှင့်နှလုံးအတွက်ကောင်း၏ ။ အ၀ါရောင် ရှိသော အသီးအရွက်များသည်အစာချေခြင်းအတွက်ကောင်း၏ ။
၃၀.သွးပေါင်နည်းနေသော်လည်း နေထိုင်ကောင်းနေလျှင် မစိုးရိမ်ရပါ ။
၃၁.မျက်နှာတွင် ၀က်ခြံ ထွက်ပေါ်လာခြင်းသည် သွေးထဲမှအဆိပ်အတောက်များကို မဖယ်ရှားနိုင်ခြင်း လက္ခဏာ တစ်ရပ်ပင် ဖြစ်သည် ။
၃၂. နံနက်စောစော အချိန်တွင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သစ်ပင်ပန်းမာလ်များမှအောက်ဆီဂျင်ကို နံနက်ပိုင်းတွင် အများဆုံးရခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည် ။ညနေခင်းအချိန်တွင် သစ်ပင်များမှ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ထုတ်သည့်အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန် မသင့်လျှော်ပါ ။
၃၃. ခေါင်းကိုက်ခြင်းသည် နှလုံးမှ သွေးများတွင် အောက်ဆီဂျင်ပမာဏ နည်းပါးနေခြင်းကို ပြသသော ရောဂါ လက္ခဏာ တစ်ရပ် ဖြစ်သည် ။
၃၄.မျက်ကွင်းညိုခြင်းသည် အသည်းနှင့် ကျောက်ကပ်အားနည်းနေခြင်းကို ပြသည် ။ ထိုအတွက်ကြောင့် ညဉ့်နက်သန်းခေါင်အလုပ်လုပ်သူများ အသည်းအနားမရ၍ မျက်ကွင်းညိုကြခြင်းဖြစ်သည်။
အားလုံးပျော်ရွှင် ကျန်းမာကြပါစေ။ အသည်းကောင်းပြီး စိတ်ရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေ။
ကျေးဇူး အရမ်းတင်ပါတယ်။ သို့ သော်လည်း ……
ကျုပ် ၆ နာရီမှာ အလုပ်ပြီးတယ်။ ၇ နာရီခွဲကနေ ၉ နာရီ အထိ ကော်ဖီဆိုင်ထိုင်တယ်။
၉ ခွဲ ကနေ ၁၀ ခွဲ အထိ မန်းလေး ဂေဇတ် ဖတ်တယ်။
၁၀ ခွဲမှာ အရက် စသောက်တယ်။ ၁၂ နာရီမှာ ထမင်းစားတယ်။
ထမင်းစားပြီးရင် ပြန်ထပ်သောက်တယ်။ ၁ နာရီမှာ အိပ်ရာဝင်တယ် ။
မနက် ၆ နာရီ အိပ်ရာထတယ်။ အိပ်ရာထထချင်း ဆေးလိပ်သောက်တယ်။
ပြီးရင် ဘာမှ မစားပဲ ၇ နာရီမှာ ရုံးသွားတယ်။ ရုံးမ၀င်ခင် လမ်းမှာ ကော်ဖီသောက်တယ်။
ရုံးရောက်တော့ ကော်ဖီ ထပ်သောက်တယ်။ နေ့ လည်စာကို ၂ နာရီနောက်ပိုင်းမှ စားတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ပဲ ၃ နှစ် အတွင်းမှာ ခါးပတ်အပေါက် ၃ ပေါက်တိုးလာတယ်။ လက်ပတ်နာရီ ၂ ဆစ် ဖြုတ်လိုက်ရတယ်။
သောက်တတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ညနေဘက် ကော်ဖီဆိုင်ထိုင်နိုင်တယ်လား။
ကိုယ်တို့တော့ တော်ရုံ ဘယ်ကော်ဖီဆိုင် ဘယ်လဘက်ရည်ဆိုင်မှ ပုံမှန်အားဖြင့်မထိုင်တတ်ဘူး။
အခုနောက်ပိုင် အသက်လေးရလားလို့ လျှော့လိုက်တော့မှ တစ်ခါတစ်ရံ လဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ဖြစ်တယ်။
သို့သော်လည်း နေညိုလို့ လွပ်လပ်စွာထိုင်မယ်ဆိုလို့ကတော့ မသောက်တတ်တဲ့သူကိုတောင် ဆိုင်အပါခေါ်ထိုင်တယ်။ ည ၁၀နာရီခွဲမှာတော့ ဘယ်လိုမှ ထပ်မသောက်နိုင်တော့ပါ။ မှောက်နေပြီလေ။
(လွန်ခဲ့တဲ့ ၂-၃နှစ်လောက်ကစပြီး များများ မသောက်နိုင်တော့ဘူး။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ချတာပေါ့။
ဘယ်လောက်သောက်သောက် မူးတယ်မထင်ဘူး။ အခုတော့ မရတော့ဘူး။မူးပြီ။ များတာနဲ့ သိတယ် သောက်လို့ကိုမရတော့ဘူး။ နောက်ပြီး.. မသေချင်သေးဘူးလေ။)
ကျွန်တော်တို့တစ်တွေဟာ သာမန်လူတွေများပါတယ်။ ပုထုဇဉ်တွေပေါ့။ လောဘ ဒေါသ မောဟ စသည်အပြည့်နဲ့ပါ။ ခက်တာက လူဆိုတာမျိုးဟာလဲ မကောင်းမှု့မှာမှ ပျော်ပိုက်တတ်တာမျိုးကိုဗျ။
ဒါပေမဲ့လေ ကောင်းတာတွေကို ခက်ခဲနေပေမဲ့လေ့ကျင့် ပျိုးထောင်ယူရမှာပါပဲ။ ဟို… ဘတ်စ်ကားတွေမှာ ရေးထားသလိုမျိုးပေါ့ ဆန္ဒကို သိက္ခာဖြင့် ထိန်းပါဆိုသလိုပါပဲ။
စိတ်အလိုကို လိုက်နေသမျှတော့ လူပေမဲ့ တိရိစ္ဆာန်နဲ့ ဘာထူးတော့မှာလဲနှော။
ကျွန်တော်လဲ ပုထုစဉ်မို့ မကောင်းစိတ်ဒင်းကြမ်းနဲ့ပါ။ ကျိုးစားပြုပြင်နေရတာပါပဲ။
သောက်ချင်တယ်ဆိုရင် ကြိုက်သလောက်သောက် လုံးဝမှောက်အောင်တော့မသောက်နဲ့။
သောက်ချင်တယ်ဆိုရင် နေ့တိုင်းသောက် ဒါပေမယ့် ပုလင်းထဲတစ်စက်မှ မကျန်အောင်တော့ မသောက်နဲ့
သောက်ချင်တယ်ဆိုရင် ၀အောင်သောက် ဒါပေမယ့် သေအောင်တော့မသောက်နဲ့။
ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ ပေါင်းခံရည် ကြာရှည်သောက်နိုင်အောင် သတိနဲ့နေပေါ့ကွယ်.
ခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်ပြီး ကြောက်လို့ မဖွင့်ကြည့်တာ
အရက်ဆိုတာ သောက်တတ်ရင်ဆေး မသောက်တတ်ရင်ဘေးတဲ့ဗျ
ကျုပ် … ခွေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ထုပ်တွေကို
ဒါက မြန်မာပြည်ကလူတော်တော်များများ သိတယ်ဗျ
ခွေးတွေ ကြောင်တွေကို ကြွေးတာဗျ
ကောင်းတာကိုကောင်းမှန်းမသိတဲ့သူကလဲ လူမိုက်ထဲမှာ ပါ ပါသတဲ့
… ဆရာဝန်(ကျမ်းမာရေး ပရိုဖက်ရှင်နယ်..) တယောက်ယောက်ကရေးထားသလို.. တော်တော်တိကျနေတာဖြစ်လုိ့ပါ..။
မေ့လျော့ ပေါ့ဆ.. မူးယစ်ထုံထိုင်းဘေးဖြစ်စေတတ်တဲ့..ဓါတ်..ကမ်မစ်ကယ်တွေ… ဒီခေတ်မှာ.. အများကြိးပဲ..။
စက်ရုံတွေကထုတ်လို့…. လေထုထဲတောင်.. ပြန့်နေသေးတယ်..။
လူတွေအသက်ကယ်နေတဲ့..ဆေးဝါးတွေ.။ ယုတ်စွအဆုံး..ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးမှာလည်း ပါတယ်.။
သုရာမေရယ မဇ္ဇပမာဒဋ္ဌာနာ- မေ့လျော့ ပေါ့ဆခြင်း၏ အကြောင်းစင်စစ် မူးရစ်စေ တတ်သည့် သေရည်အရက်ကို သောက်စားခြင်းမှ၊ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ- ရှောင်ကြဉ်ရကြောင်း ကောင်းမြတ်သော သိက္ခာပုဒ်ကို၊ သမာဒိယာမိ- စိတ်၌မြဲစွာ ဆောက်တည်ပါ၏။
အဲဒီမှာ.. အလွန်အကျွံ.သတိ.မေ့လျှော့စေတတ်သည်အထိ.. ကျမ်းမာရေးထိခိုက်သည်အထိ..လို့ဖြည့်စွက်ထည့်သင့်တယ်…
တွေ့ပါပြီဗျာ.. အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်း..။ တော်တော်အငြင်းပွားစရာတွေပါတယ်.။